Inona no atao hoe LLLP - Limited Partnership Limited Limited
Inona no atao hoe LLLP?
Ny LLLP dia fikambanana tsy miankina iray. Ireto ny tombontsoa roa lehibe amin'ity orinasa ity. Voalohany, miaro ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny andraikiny izy ireo rehefa iharan'ny fifanarahana. Faharoa, manome fiarovana amin'ny fiarovana. Izany hoe, raha misy olona mangataka mpiara-miombon'antoka manokana, dia miaro ny vola ao anatin'ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny fandraisana ny mpampindram-bola ny mpiara-miasa. Noho izany, na avy amin'ny orinasa na avy hatrany dia manendry mpiara-miombon'antoka ny lalàna dia afaka manome sazy ara-dalàna ny LLLP.
Ity karazana fiaraha-miasa ity ihany koa dia manome andraikitra voafetra ho an'ireo mpiara-miasa amin'ny ankapobeny ny fiaraha-miasa tsy miankina. Tsy toy ny fiaraha-miasa voafetra izany, izay ahafahan'ny mpiara-miombon'antoka rehetra mandray ny andraikitra rehetra amin'ny fiaraha-miasa. Ny lalàna iombonana momba ny fiaraha-miasa sy ny fifanarahana ifaneraserana dia mbola mitoetra. Ny tantaran'ny lalàna momba ny fiarovana efa ela no omena amin'ny fiaraha-miasa voafetra dia ampiasaina mba hanomezana fanampiana ireo fiarovana miantoka ny lalàna ho an'ity orinasa ity.
Fametrahana fiaraha-miasa voafetra
Any amin'ny ankamaroan'ny firenena dia misy ny fiaraha-miombon'antoka miorina eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina. Ny fiaraha-miasa voafetra dia mety ho lasa fiaraha-miasa voafetra voafetra amin'ny fifidianana sy fanitsiana ny fiaraha-miasa. Amin'ny ankamaroan'ny firenena, ny fiaraha-miombon'antoka dia mbola hitohy ho toy ny antoko ara-dalàna efa nisy teo aloha.
Amin'io fanoratana io dia ekena ny fisian'ny fiaraha-miasa amin'ny Limited Liability Limited ao amin'ireto sata manaraka ireto:
Firenena maro hafa dia manomboka mahafantatra ny Partnership Limited Limited. Na dia tsy manana lalàm-panjakana momba ny fananganana California LLLP aza i Californie, dia miaiky fa ny LLLs dia voaforona araka ny lalànan'ny fanjakana hafa.
Ny mpiara-miombon'antoka jeneraly dia nametra-panontana mitovy amin'ny tompon'andraikitry ny orinasa iray. Tsy manova ny tombontsoa azo avy amin'ny fiaraha-miasa toy ny fiaraha-miasa amin'ny fiaraha-miasa izay tsy omena ny olona iray. Mampihena ny mety ho tompon'andraikitra amin'ny ankapobeny.
Ny lalàna momba ny fiarovana miantoka ny fiaraha-miasa dia mampiseho tantara goavana momba ny "raharaha momba ny lalàna" manaporofo fa manome fiarovana ny LP ny tompon'ny LP. Na izany aza, ny LP dia manana "mpiara-miombon'antoka ankolaka" ara-dalàna. Rehefa manenjika ny orinasam-pitantanam-pitondrana ity fikambanana ity, dia mitondra fiarovana miorina amin'ny lalànan'ny LP ary koa manana tombony amin'ny fanomezana fiarovana ny tompon'andraikitra mitana toerana "mpiara-miasa ankapobeny" "Amin'ny anaran'ny LLLP.
Ny famolavolana ny LLL dia mitovy amin'ny fampidirana. Lahatsoratra manokana no nalefa tamin'ny governemantam-panjakana. Ny fiafarana ara-dalàna dia toy izao manaraka izao: Fandraisana iraisam-pirenena voafetra, LLLP, na LLLP
Ny fampahafantarana atolotr'ity tranonkala ity dia natao hanomezana vaovao mahasoa sy manam-pahaizana ary fanohanana ny fikarohana momba ny foto-drafitr'asa. Izany dia aseho amin'ny fahazoan-dàlana fa ny Companies Incorporated dia tsy mandray anjara amin'ny fanaovana lalàna, kaonty, na toro-hevitra hafa matihanina. Raha ilaina ny torohevitry ny lalàna na ny fanampiana ara-pitaovana hafa, dia tokony hikaroka ireo serivisy manampahaizana matihanina.